बच्चाको मानसपटलमा जुगौँजुग बाँचिरहने शिक्षक बन्ने कि !
धुलाम्मे चौरमा खुसीको टोपी लुकाइ खेल खेलाउने, उमंगको चुंगी खेलाउने तिमी नै हो । खेल खेलेको त्यो दिन आजैजस्तो लाग्छ । तिमी नाँचेपछि मेरो लाज सधैँका लागि छोएर जाने बतासजस्तै गयो । जो कहिल्यै फर्किएर आएन । मभित्रको लाजको ढिस्को भत्काउने, हीनताको शिरमा ह्याम्मरले हिर्काउने तिमी नै हौ । तिमी – शिक्षक ।
परीक्षाको दौडमा हारेको बेला, मैले फेलको उपनाम पाएर बदनाम भएको बेला 'नम्बर मात्रै ठूलो कुरा होइन, तिमीमा अरु पनि क्षमता छ, सक्छौ' भन्दै हौसलाको धाप मार्ने तिमी नै थियौ ।
'बच्चालाई माया र प्रशंसा गरेपछि पुलपुलिन्छन्' भन्नेहरूको भीडमा मलाई माया र प्रशंसाको स्पर्शले छुने तिमी नै थियौ । मेरो भोको पेटको भाका सुन्दै भोकसँग लड्न ऊर्जा थप्ने तिमी नै थियौ । घण्टौँ हिँडेर स्कुल पुग्ने मेरा थकित पैतालालाई गतिशील बनाउन समय खर्चिने तिमी नै थियौ ।
विज्ञानमा हाइड्रोजन ग्यास बनाउन लगाएको त्यो दिन मलाई आजैजस्तो लाग्छ । नेपालीमा 'धनभन्दा विद्या ठूलो' विषयक कक्षागत वक्तृत्वकलामा बोल्न लगाएको याद ताजै छ । नाटक शब्द मात्रै हामीले सुनेका थियौँ । नाटक गर्न लगाउने शिक्षकको याद नाटक शब्द सुन्नेबित्तिकै आउँछ ।
वनभोजमा पहिलो पटक सेल रोटी पकाएको, परिकार बनाउने बेला आगोले साथीको बुढीऔँला पाेलेको, अनेक परिकार बाँडेर खाएको, नाँचेको, याे मानसपटलमा अझै ताजै छन् तमाम दृश्यहरू ।
तर, कक्षाकोठामा पण्डितले वेद रटेझैँ रटेका पाठहरू किन सम्झनामा छैनन् ? किन याद आउँदैनन् ? जिन्दगीमा दर्जनौँ शिक्षकहरूले पढाए । दर्जनौँ शिक्षक कक्षाकोठामा भेटिए । तर, किन दुई र चार जना शिक्षक मात्रै सम्झनामा रहन्छन् ? कुखुरा बनेर सजाय पाउँदै रटेका परिभाषाको अस्तित्व किन हरायो ? सम्झिँदा छक्क पर्छु अहिले ।
रटेका कुरा रट्दारट्दै हराए । घोकेका कुरा, घोक्दाघोक्दै घोप्टिए। तर, गराएका र गरेका केही कुरा हृदयमा बसेका छन्, केही मस्तिष्कमा, केही आँखामा अनि केही निरन्तर गर्न बानी परिसकेको छ जिन्दगीमा ।
यस्तो पनि लाग्छ, पढ्दापढ्दै बिर्सिएर जाने कुरा किन पढाइयो ? किन पढियो बेकारमा ? के पढ्न बिर्सिनका लागि हो ? के सिकाइ बिर्सिनका लागि हो ? बिसिर्नका लागि पढ्न जरुरी छ र ? किन समय, स्रोत र श्रमको क्षति ? धेरै पढिने, धेरै रटिने तर जिन्दगीमा कम काम लाग्ने । किन असन्तुलन ?
हाम्रो सिकाइको धरातल त्यसै कमजोर भएको कहाँ हो र ? हामी जीवनका लागि भन्दा पनि परीक्षाका लागि पढ्छौँ । सिक्नका लागि भन्दा पनि अंकका लागि पढ्छौँ । जान्नका लागि भन्दा पनि प्रमाणपत्रका लागि पढ्छौँ । हामी त्यसै कमजोर भएका हौँ र ?
विज्ञानमा बलको नियम घोकाएको क्षण थाहा छ । घोकेको नियम याद छैन । नघोकेको पनि होइन । परीक्षामा नलेखेको पनि होइन । शिक्षक र साथीहरूको अगाडि भटट मन्त्रझैँ नजपेको पनि होइन । तर, समय बितेसँगै प्रमाणपत्र मात्रै हातमा । बाँकी सबै चीज हराएजस्तो लाग्छ । र्बिसिएजस्तो लाग्छ । यो कस्तो शिक्षा हो ?
मेरा केही साथीलाई सोधेँ, 'तपाईंले के कुरा सिकेको याद छ स्कुलमा ?'
'मकैका दाना प्रयोग गरेर जोडघटाउ सिकेको ।'
'सामाजिक सरले विश्वयुद्धको भिडियो देखाएर सिकाएको ।'
'पूर्व व्यावसायिक शिक्षामा अलैँची रोपेर फलाएका थियौँ । अझै याद छ ।'
'१४ अञ्चलका नाम गीत बनाएर याद गरेको ।'
साथीहरूले यस्तैयस्तै उत्तर दिए । धेरैजसो साथीले स्कुलमा सजाय पाएको याद नै झलझली आउने बताए । त्यो त एक्सट्रिम फिल गरेको कुरा दिमागमा लामो समयसम्म रहने हुनाले आफूले पिटाइ पाएका तिता क्षणहरू र्बिसिन कठिन हुन्छ होला ।
'कसैले शिक्षकले सिकाएका अथवा गराएका कुनै दशवटा कुरा भन्नुहोस् न' भनी सोध्दा हामीलाई मुस्किल लाग्छ सम्झिन । तर, १० वर्ष त हामीले स्कुलमै बिताएका छौँ । दशवटा सिकेका कुरा सम्झिन सकस लाग्छ, किन ?
'स्कुले जीवनमा गराएर सिकाएका सबै कुरा याद छन् । तर रटाएका, घोकाएका सम्झनामा कुनै छैनन्', नजिकका एक मित्रले भनेका थिए ।
मैले स्वयम् केही मेरा भुलक्कड भनिने विद्यार्थीलाई सोधेँ, 'गणित गाडेन बनाएको । अनि ज्यामितीय आकृतिको क्षेत्रफल निकालेको याद छ ?'
ती विद्यार्थीले भने, 'नाटकबाट नाफा नोक्सानको अवधारणा बुझाएको, कक्षा बैंक बनाएर पैसा जम्मा गर्दै, ब्याज दिएको लिएको, बोतल ढाली खेलबाट मध्यक निकाल्न सिकेको, तास खेल्दै सम्भाव्यता निकालेको अझै स्मृतिमा आउँछ ।'
के मैले यत्ति मात्रै सिकाएको थिएँ र ? पक्कै थिइनँ । गतिविधिबाट सिकाएका अधिकांश विषयवस्तु सजिलै सम्झनामा रहने रहेछन् । कक्षाकोठामा घोकाएका सबै पाठहरू, सूचनाहरू समयक्रमसँगै हराउने रहेछन् ।
एउटा पुरानो फिनिस भनाइ छ, 'ती चीजहरू जुन तपाईंले आनन्दबिना सिक्नुभयो, तपाईंले सजिलै बिर्सनुहुनेछ ।' सन् १९६० को दशकमा सिकाइ पिरामिडको विकास भएको थियो । सो सिकाइ पिरामिडअनुसार ९० प्रतिशत हामीले गरेर सिकेका चीजहरू हाम्रो मानसमा लामो समयसम्म रहने गर्दछन् । रटेका कुरा १० प्रतिशत मात्रै याद हुन्छन् ।
शिक्षामा उत्कृष्ट मानिने फिनल्याण्डको सिकाइ प्लेमा आधारित छ, रटाइमा होइन । राम्रा शिक्षकहरू कलाकार हुन्, जसले शिक्षण सिकाइमा कला भर्छन् । राम्रा स्कुल ती हुन्, जहाँ कला देखाउन पाइन्छ, देख्न पाइन्छ । ८९ लाख हाम्रा बालबालिकाले प्ले गर्दै सिकाउने शिक्षक र सृजनशील स्कुलमा पढ्ने अवसर कहिले पाऊलान् ?
शिक्षामा उत्कृष्ट मानिने फिनल्याण्डको सिकाइ प्लेमा आधारित छ, रटाइमा होइन । राम्रा शिक्षकहरू कलाकार हुन्, जसले शिक्षण सिकाइमा कला भर्छन् । राम्रा स्कुल ती हुन्, जहाँ कला देखाउन पाइन्छ, देख्न पाइन्छ ।
१० वर्षमा हजारौँ घण्टा हजारौँ पाठ पढ्नमा व्यतित भए । हजारौँ गतिविधिबाट सिक्न पाएको भए हाम्रो सिकाइ, सोचाइ, गराइ र बँचाइको दायरा कति फराकिलो हुँदो हो ? कति शिक्षकहरूको सम्झना आउँदो हो ? कति गर्वले भन्न पाइँदो हो- फलानो शिक्षकले मलाई फलानो सिकाए भनेर ।
मेरो जिन्दगीमा ती शिक्षकहरू सार्थक बनेका छन्, जसले मलाई धुलोमा खेलाउँदै लेख्न सिकाए । जंगल डुलाउँदै जसले विज्ञान सिकाए । दौडाउँदै जसले स्वास्थ्य सिकाए । गीत गाउँदै, कथा सुनाउँदै जसले भाषा सिकाए । खेल खेलाउँदै जसले नियम सिकाए । समाज सिकाए । संस्कार सिकाए । सायद जिन्दगीको पल्लो छेउमा पुगेको क्षणमा पनि यसरी सिकाउनेहरूको याद आइरहनेछ । चर्चा भइरहनेछ । यसरी सिकाउने शिक्षकहरू सधैँ बाँचिरहनेछन् ।
कक्षाकोठामा पाठ भट्याएर ढोकाबाट निस्किँदा बच्चाले बिर्सने शिक्षक बन्ने कि बच्चाको मानसपटलमा कलाकार भएर जुगौँजुग बाँचिरहने शिक्षक बन्ने ?
'सुनेको र्बिसिन्छ, देखेको सम्झिन्छ, गरेको बुझिन्छ ।' आज भन्दा २५ सय वर्षअघि कन्फुसियसले पनि त्यसै भनेका होइनन् रहेछन् । कक्षाकोठामा हामीले जति गर्दै सिक्छौँ, त्यति नै सिकाइ दिगो बन्छ । सार्थक हुन्छ । सिकाइ परीक्षाका लागि मात्रै होइन, जीवनका लागि बन्छ ।
तपाईंले पनि यसो आफ्नो स्कुले/कलेज जीवनलाई फर्किएर हेर्नुहोस् न ! के-के सिकेका कुरा याद छन् ? कसरी सिकेको ? कति सिकेको सम्झना छ ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७, १७:३३:००